မင်းသမီး နှင့် ယိုးသားသောလယ်သမားများ – Link2| MM Movie Store
ဒီတခါတော့ DSဖန်တွေကို အလှပဂေး hojo-samaမိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်…အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမဟာ ရိုက်ကွင်းအတွက် ရွာတရွာကို သွားခဲ့ပါတယ်.ရွာထဲက စိုက်ခင်းတစ်ခုမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ယိုးသားတဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေနဲ့ ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်.
လိုနဲ့ပဲ သူမရဲ့ ဌာနေကို ပြန်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ယိုးသားတဲ့ ရွာသားတွေရော သူမပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…ရွာကပြန်ရမယ့်နေ့မှာတော့ သူမဟာ သူမခင်မင်တဲ့..ယိုးသားကြိုးစားတဲ့ ရွာသားတွေကို ဘယ်လို ကျေးဇူးတုန့်ပြန် နှစ်သိမ့်ပေးမယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြည်ကြည်လင်လင်တင်ဆက်ပေးထားတေကြာင့်
DSဖေတွ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…၂၁+ ဖြစ်တာကြောင့် ၂၁အောက်မကြည့်သင့်ပါ.
Live – Link 1
Holy Mother, Please! Nana Ayano – Link 2
Don Jon – Link 1
Don Jon – Link 2
A Muse – Link 1
A Muse – Link 2
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုင်း (၁၆)